Iweghachite njem nlegharị anya Dominican bụ ụgha? Simpson's Paradox Na -ele Eziokwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic » Iweghachite njem nlegharị anya Dominican bụ ụgha? Simpson's Paradox Na -ele Eziokwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Mmetụta ọrịa na -efe efe na njem nlegharị anya n'ụwa niile yana nke metụtara akụnụba ụwa adịla ukwuu. Onyinye nke njem nlegharị anya na ngwaahịa Global Gross World na 2020 - ijeri $ 4.7 - bụ ihe dị ka ọkara nke 2019. N'ime akwụkwọ na -adịbeghị anya, onye isi na -ahụ maka ọgbakọ ọgbakọ mba ụwa na azụmaahịa na mmepe (UNCTAD) na -eme atụmatụ na n'ọtụtụ. atụmanya dị mma, na njedebe nke afọ, anyị ga -abụ 60% n'okpuru 2019.
Ebe njem bụ ihe dị mkpa na akụnụba ụwa, mgbake na mba niile dị oke mkpa.
N'oge na -adịbeghị anya, Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Dominican ewepụtala data na -egosi na ngalaba ahụ na -enwe mgbake dị egwu.
Ọ bụ ezie na data ahụ ziri ezi, nkọwa nwere ike ịhapụ otu onye na -ajụ ihe ngosi nke mgbake dị otu a.
Iweghachite bụ ebumnuche mba niile, ebe ọ bụ na njem nlegharị anya bụ akụkụ dị mkpa na akụ na ụba ụwa, mana ọkachasị ndị nwere njem dị ka akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba.
N'ime izu ole na ole gara aga, Ministri njem nlegharị anya nke Dominican ewepụtala data nke ga -egosi nnabata na -abata na Dominican njem nlegharị anya. Data ziri ezi, mana nkọwa ha chọrọ nyocha nke na -etinye ọkụ na onyinyo nke mgbake a, dabere na data zuru ụwa ọnụ nke na -achịkọta data akụkụ nke njirimara dị iche iche.
Ruo afọ iri ise, amụrụla mmetụta nke achọpụtala n'ezie ihe karịrị otu narị afọ gara aga, ihe ịtụnanya Simpson. Enwere ike iru nkwubi okwu ụgha mgbe ọnụ ọgụgụ jikọtara data na-abụghị otu. Na -etinyeghị nkọwa nke mgbakọ na mwepụ mgbakọ na mwepụ, anyị na -ahụ na ọ na -enye ohere ịghọta oke njedebe nke nkọwa data site na Dominican Ministry of Tourism, data, nke eziokwu ya, anyị na -ekwughachi iji zere nghọtahie, anaghị ajụ ajụjụ.
Ọ dị mkpa ịghọta oke ndị a achọghị ezi ihe na mba ebe, na 2019, site na ntinye ego mgbanwe mba ofesi, njem nlegharị anya nyere 8.4% na GDP, na -anọchite anya 36.4% nke mbupụ ngwaahịa na ọrụ. Ọzọkwa, njem nlegharị anya, n'agbanyeghị agbanyeghị 13% ma e jiri ya tụnyere 2018, nyere aka na 2019 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% nke itinye ego itinye ego na mba ofesi.
Maka ebumnuche ndị a, jiri nlezianya nyochaa nkwupụta ahụ na Dominican Republic, ngalaba njem na-ahapụ ya nsogbu nke oria ojoo COVID-19 kpatara bụ isi maka atumatu ọha obodo, yana ịduzi mkpebi akụ na ụba nke ndị na-arụ ọrụ na ngalaba.
Ka anyị cheta isi data nke Ministri zoro aka na ya:
-Ndị na-abụghị ndị mbata site na ikuku, n'ọnwa Ọgọst nke afọ a, na-anọchite anya 96% nke ndị nọ na 2019, omume karịrị nkwenye nke ihe mere na ọkara mbụ nke Septemba.
- A na -akwado usoro a site nyocha kwa ọnwa maka mgbake nke ihe ngosi a kemgbe mgbake ahụ. atụnyere 2019, anọwo na-eto, site na 34% na Jenụwarị-Febụwarị, ruo ihe ruru 50% na Machị-Eprel, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% na Mee-June na 95% na July-August.
-Mbata nke ndị na-abụghị Dominican bi na-eto n'ike n'ike ruo ọnwa iri.
- Onu ogugu ndị njem na -anọ na họtel bụ 73%.
Ndị a niile bụ eziokwu na edepụtara. Agbanyeghị, Simpson na -echetara anyị na ha na -ezo aka n'omume na -achịkọta otu dị iche iche na oge dị iche iche.
Nchịkọta oge nke oge a ga -adị mma ma ọ bụrụ na enwere nkwụsi ike na ndị bịarutere na ọkwa kwa ọnwa na oge ahọrọ maka ntụnyere. Ọ bụghị otu a, ọnwa 2019 adabaghị na ntụnyere dị otu a na 2021. N'afọ ahụ, ndị na -eme njem nlegharị anya metụrụ aka na mmetụta nke ọnwụ ụfọdụ ndị njem n'etiti May na June, nke tụgharịrị uto na njem nlegharị anya North America. na ọkara mbụ nke afọ (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10%) gbadata na 3% n'ime ọnwa iri mbụ (4% ma ọ bụrụ na -atụle mkpokọta ndị mbata si mba ọzọ).
Nke a chọrọ ịmata ka nke ahụ dị 96% n'ọnwa Ọgọst ma ọ bụ karịa 110% n'ime izu abụọ mbụ nke ọnwa a bụ n'ihi mgbake nke ọnụọgụ (ndị bịarutere 2021) yana ego ole ọ ga -ada na denominator (ndị bịarutere 2019).
Mmetụta a na-adịkarị arọ ma ọ bụrụ na etisasịrị ndị mbata ahụ dabere na ihe ọzọ na-adịghị mma, na-amata ndị na-abụghị Dominican na ndị mba ọzọ.
Anyị na -eme ya na tebụl na -esote ebe anyị gosipụtara nke a data, maka ọnwa Jenụwarị-Ọgọst, malite na 2013.
Data ndị a, na-agbaghaghị ntụnyere nke ụlọ ọrụ maka ọnwa Ọgọstụ, degharịa ya, ebe ọ bụ na n'ime ọnwa asatọ, ndị bịara na ngụkọta bụ 60% nke ndị 2019 na anyị ga-alaghachi na 2013 iji chọta ọnụ ọgụgụ dị ala. . Ntụnyere ikpeazụ a na -ezo aka na data niile, mana ọ bụrụ na anyị ga -etinye uche na nke ndị mba ọzọ naanị, nke a ga -enye 53%, ma e jiri ya tụnyere 2019, yana 72%, ma e jiri ya tụnyere 2013.
Ntụle nke ndị mba ọzọ na-abụghị ndị ọbịa dị mkpa n'ihi na ndị Dominican na-abụghị ndị bi na ya nwere ike ghara iji ọrụ ndị ọzọ dị ka ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, ụlọ nri, njem. Nleba a na -atọ ụtọ nke ukwuu na -akwado ndị bi na họtel, nke, n'agbanyeghị na ha bụ ndị mba ọzọ 86% nke ndị kwetara, dị obere karịa ego a, ebe akụkọ ihe mere eme, pasent abụọ a na -adịbu otu.
Enwere data ọzọ na-abụghị otu nke metụtara njem nlegharị anya nke kwesịrị itinye. Data a, ewepụtara na tebụl na-esote, na-ezo aka na ndakpọ nke ndị mbata site na mpaghara nke ndị na-abụghị ndị bi.
Year North America Europe South America Central America
Data kachasị mkpa maka ntụgharị uche anyị bụ uto nke njem nlegharị anya nke North America yana ọdịda nke sitere na Europe. Ọ bụrụ na a na -atụle data a yana nke metụtara mba, nke anyị na -ekwu maka mmetụta ya na -apụtabeghị, ọ dị ka enweghị ike ịkwụghachi mmetụta ọjọọ nke mbelata njem nlegharị anya na Europe site na mmụba na njem nlegharị anya nke North America.
Ihe data Europe na -akwado amụma a maka mgbake nke okporo ụzọ ikuku Europe. Ntụnyere dị n'etiti oge ọkọchị a na afọ ndị gara aga na -egosi na ọ bụ naanị 40% nke okporo ụzọ 2019 ka agbakere, yana nkwalite ma e jiri ya tụnyere 2020, mgbe mgbake ahụ bụ 27%. Ekwesịrị ịgbakwunye na okporo ụzọ ụgbọ elu abụghị ihe ngosipụta otu, ebe ọ bụ na na Europe enwere ntakịrị mgbake nke okporo ụzọ nke kwesịrị ịmasị ọtụtụ Dominican Republic, nke ụgbọ elu nke etiti. N'ezie, ndị gbakere bụ ụgbọ elu dị ọnụ ala nke Europe. Taa, ha na -anọchite anya 71.4% nke ngụkọta, ebe afọ abụọ gara aga, ha nọchitere anya naanị 57.1%, na ekwesighi ileghara ya anya na ebe ndị na -enye onyinye kachasị na nsonaazụ a, n'ụzọ ụfọdụ, na -anọchite anya ihe ọzọ na -enye ndị njem nlegharị anya Caribbean.
Nke a ga -agbakwunyere na usoro European Green Pass anaghị amasị njem nlegharị anya na Europe n'ihi na ọgwụ mgbochi a na -ejikarị na Dominican Republic, Sinovac anaghị anabata ịnata Green Pass. Nke a nwere ike bụrụ ihe a na-enyo enyo, mana ọ na-emetụta mpaghara ụlọ ọrụ njem, nke mere na ihe ga-esi na ya pụta bụ na a ka nwere ụzọ dị anya tupu njem nlegharị anya Dominican alaghachi na ọkwa mbụ ya.
Ịtụkwasị obi na mgbake nke ọrịa tupu oria ojoo n'ihi njikwa ọrịa na-efe efe nwere ike bụrụ nke nwere nchekwube, na nke ọ bụla, o yighị ka ọ ga-eme n'oge adịghị anya.
Nke a pụtara na, n'etinyeghị oke mkpa maka nkwalite ntụpọ ole na ole n'ime pasent ndị a, ọ dị mkpa iche maka amụma mmegharị na-ele anya n'etiti etiti afọ 2023.
Nkwupụta sitere na World Travel and Tourism Council na -akwado maka ime ihe ike site n'aka gọọmentị, dị ka itinye ego na ịdọrọ itinye ego nke ụlọ ọrụ onwe na akụrụngwa anụ ahụ na dijitalụ na ịkwalite akụkụ njem dị iche iche, dịka njem nlegharị anya ahụike ma ọ bụ njem nlegharị anya MICE. Nke a na-egosi amụma zuru ụwa ọnụ, nke na-abụghị nke sekit na-etinyekwa akụkụ ndị ọzọ nke ọha mmadụ.
Echiche ndị yiri nke ahụ bụ ọnwa abụọ gara aga site n'aka onye isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka UNCTAD, na -ekwusi ike na ọ dị mkpa ịtụgharị uche na ụdị mmepe njem, kwalite njem nlegharị anya obodo na ime obodo, na digit.
Akụrụngwa dị na mba ahụ na -enye ohere omume ndị a, nke a na -achọkwa usoro nkwalite siri ike, nke ejikọtara ya na ụlọ ọrụ onwe, na -enweghị afọ ojuju na eziokwu na a na -eme mgbake ụfọdụ. Eziokwu ahụ bụ na na njedebe nke afọ a enwere nde mmadụ 4.5 ma ọ bụ nde ise, ka pere mpe ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga, agaghị enwe nnukwu mgbanwe, belụsọ na emepụtara ọnọdụ maka nrụzigharị ngalaba ahụ nke ọma, nke ga -eme ka obodo ahụ nwee ike. jigide isi ọnọdụ ya na njem nlegharị anya Caribbean.